Android အတွက်မြေပုံ Marker APK ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » ဂျီပီအက်စ် & ခရီးသွား Apps ကပ » မြေပုံညွှန်မှတ်
မြေပုံညွှန်မှတ် APK ကို
ဒီ app ကိုသင်ပင်အင်တာနက်ချိတ်ဆက်စရာမလိုဘဲအမှတ်အသားများနေရာခွင့်ပြုနိုင်ရန်အတွက် Google Maps ကိုများနှင့်အခြားသတင်းရင်းမြစ်များကိုအသုံးပြုသည်။
သင်သည် app နှင့်အတူမည်သည့်ကိစ္စများရှိပါကကျွန်မအများဆုံးဖွယ်ရှိကူညီနိုင်ပါလိမ့်မည်, theandroidseb@gmail.com မှာငါ့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
•အော့ဖ်လိုင်းမြေပုံများ! BETA အင်္ဂါရပ်: တခြားနေရာအော့ဖ်လိုင်းမြေပုံဖိုင်တွေဆည်းပူးခြင်းနှင့်သောအခါ၌ပင်အော့ဖ်လိုင်းမြေပုံကြည့်ဖို့သူတို့ကိုအသုံးချ!
•တစ်ဦးခေါင်းစဉ်, ဖော်ပြချက်, ရက်စွဲတစ်ခု, တစ်ဦးအရောင်တစ်ခုချင်းစီအမှတ်အသားတစ်ခုအိုင်ကွန်နှင့်ဓါတ်ပုံတွေကို Set များနှင့်မြေပုံပေါ်တွင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်သူတို့ကိုရွှေ့
• text-ရှာဖွေအမှတ်အသားများစာရင်းထဲကလွယ်လွယ်ကူကူသင့်ရဲ့အမှတ်အသားများ Browse နှင့်စည်းရုံး
• Google မှနေရာများ API ဖြင့်နေရာရှာရန်နှင့်ရလဒ်အနေဖြင့်သစ်တစ်ခုအမှတ်အသားဖန်တီး
•ပြီးသား installed အခြားမည်သည့်မြေပုံ application ကိုတစ်ဦးအမှတ်အသား၏တည်နေရာကိုဖွင့်
• Display ကိုတ clic နှင့်အတူ clipboard မှအမှတ်အသား GPS စနစ်ကိုသြဒီနိတ် copy
•လမ်းကြောင်းကို-အမှတ်အသားများ Create အလွယ်တကူ၎င်းတို့၏အကွာအဝေးကိုတိုင်းတာ
•အနား-အမှတ်အသားများ Create အလွယ်တကူသူတို့ရဲ့ပတ်လည်အတိုင်းအတာများနှင့်ဧရိယာကိုတိုင်းတာ
•လက်ရှိမြေပုံ၏တစ်ဦးဖမ်းမိ image ကိုမျှဝေပါ
• KML file ကဲ့သို့ဝေမျှမယ်အမှတ်အသားများ
•တစ်ဦး QR ကုဒ်ကိုမှတင်သွင်းအမှတ်အသားများ
• KML သို့မဟုတ် KMZ ဖိုင်များ / ထံမှသွင်းကုန် / ပို့ကုန်အမှတ်အသားများ
•သင့် Google Maps ကိုအကြိုက်ဆုံးနေရာများ (ကကြယ်ပွင့်နှင့်အတူမှတ်သားသောသူတို့အား) တင်သွင်းရန်
•ပွင့်လင်းသင့်ရဲ့အမှတ်အသားများကြည့်ရှုရန် Google Earth နှင့်အတူ KML file တွေကိုတင်ပို့
•ပွင့်လင်းမြေပုံနှင့်ဆက်စပ်သောလင့်များတစ်အမှတ်အသား (Google မြေပုံ link ကို, etc ကနေ Facebook app, အဆက်အသွယ်လိပ်စာ, ကနေဖြစ်ရပ်တစ်ခု၏အဖြစ်အပျက်ကိုတည်နေရာ) အဖြစ်သူတို့ကိုထည့်သွင်းဖို့
တစ်ဦးအမှတ်အသားမှလမ်းပြသံလိုက်အိမ်မြှောင်•: တစ်အမှတ်အသားဖို့လမ်းညွှန် start နှင့်သံလိုက်အိမ်မြှောင်ထားတဲ့ဦးတည်ချက်နှင့်အမှတ်အသားသည်အဘယ်အရာအကွာအဝေးမှာသင်ပြပါလိမ့်မယ်
အမှတ်အသားများများအတွက်•စိတ်တိုင်းကျလယ်ကွင်း: အမှတ်ခြစ်ရန်နေရာ, နေ့စွဲ, Email, စာသား Multi-ရွေးချယ်မှု, ဖုန်း, Web ကိုလင့်ခ်
•ဖိုင်တွဲနှုန်းထုံးစံလယ်ယာ Create တင်းပလိတ်များ: ကလေးသူငယ်အခအမှတ်အသားများဟာသူတို့ရဲ့မိဘဖိုင်တွဲရဲ့ထုံးစံလယ်ကွင်းကိုအမွေခံရလိမ့်မယ်
(အခမဲ့အစမ်းတွေနဲ့ paid) ပရီမီယံ features တွေ:
• Google Drive သို့မဟုတ် Dropbox နှင့်အတူမိုဃ်းတိမ်ပေါ်မှာသင့်ရဲ့အမှတ်အသားများ Save
•သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သူတို့နှင့်အတူသင့်ရဲ့မြေပုံသည်မိုဃ်းတိမ် folder ကိုမျှဝေ by: မြေပုံ folder ကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်ဖြင့်မည်သူမဆိုပြုပြင်မွမ်းမံနိုင်ပြီးအပြောင်းအလဲများကိုဖိုင်တွဲသုံးပြီးလူတိုင်းကထပ်တူပါလိမ့်မည်
Android ထုတ်ကုန်တစ်ခုန့်အသတ်အရေအတွက်အားဖြင့်သင်၏ Google Account ကိုအပေါ်တစ်ဦးတစ်သက်တာအဆင့်မြှင့်များအတွက်•တစ်ခုမှာအချိန်ဝယ်ယူ
ဆုံးဖြတ်ခြင်းမပြုမီအပြည့်အဝ features တွေထွက်ကြိုးစားနေများအတွက်အခမဲ့စမ်းသပ်•
•ဖို့ / ဖိုင်များမှတင်ပို့မှုမှပြင်ပသိုလှောင်မှု⇒ဖို့ Access ကိုကယ်တင်နှင့်သွင်းကုန်
• Google Maps ကိုသုံးစွဲဖို့ Google ကန်ဆောင်မှုအတွက် configuration ကို⇒ Read
မြေပုံဖော်ပြရန် Google Maps ကိုများအတွက်•အင်တာနက်⇒
ပရီမီယံအဆင့်မြှင့်ဝယ်ယူရန်နိုင်ဖြစ်ခြင်းများအတွက်• In-app ကိုဝယ်ယူ⇒
ပထမဦးဆုံးအဖွင့်လှစ်မှာ app ကိုစတငျဖို့အင်တာနက်လိုအပ်ပါတယ်။ မြေပုံသင့်ရဲ့ device ကိုမှာသိမ်းထားတဲ့အော့ဖ်လိုင်းမြေပုံဖိုင်တွေကို အသုံးပြု. အော့ဖ်လိုင်းအလုပ်လုပ်နိုင်သောပြီးနောက်။ ဒီ app ကို Google APIs များကိုအသုံးပြုခြင်း၏စည်းကမ်းချက်များကိုလိုက်နာနိုင်ရန်အတွက် Google ထံမှအော့ဖ်လိုင်းမြေပုံအကြောင်းအရာသိုလှောပါဘူးသတိပြုပါ။
- ပုံရိပ်တွေ Desktop ကိုကွန်ပျူတာများပေါ်တွင် Google Earth အားဖြင့်ကြည့်ရှုနိုင်သည်ဖြစ်ကြောင်းကိုဒါ KMZ တင်ပို့မှုတိုးတက်
- လိပ်စာများများအတွက်ရှာဖွေရေးအရင်းအမြစ်အဖြစ် Added Android ကိုပေါင်းစည်း Geocoder
MAPinr-KML / KMZ / WM …
SW မြေပုံများ - GIS & …